Ihe ngosi Redmi Rịba ama 7S ka emepere emepe na India | Gam akporosis
E gosipụtara Redmi Note 7 n'ihu afọ a. Ọ bụ ekwentị izizi nke akara ahụ ka akara ọhụụ, na mgbakwunye na ntinye ya n'etiti igwe na gam akporo. Ngwaọrụ nke ruo ugbu a nwere ụzọ dị ezigbo mma n'ahịa, yana ahịa karịrị nke ahụ nde anọ. Ugbu a, a mara ọkwa mmalite nke Redmi Note 7S.
Nke a Redmi Rịba ama 7S bụ mbipute nke Nkọwa 7 a nke emepụtara maka ahịa India. Ọ bụ isi ahịa maka Xiaomi, yabụ anyị na-ahụ nsụgharị nke naanị ruru ahịa a. Ọ bụ ezie na ụdị ọhụrụ a anaghị ewetara anyị mgbanwe ma e jiri ya tụnyere nke mbụ.
Izu ndị a enwere asịrị banyere ụdị a. Ihe niile gosiri na ọ ga-abụ nsụgharị gbanwere, ya na ihe nhazi dị ike karị. E kwuru na Snapdragon 730, otu nke kachasị ọhụrụ site na Qualcomm, a ga-eji ya na ekwentị. Mana n’ikpeazụ ọ dịbeghị otu ahụ, dịka anyị hụworo n’ozi ya.
1 Nkọwapụta Redmi Rịba ama 7S
Nkọwapụta Redmi Rịba ama 7S
Nke a Redmi Rịba ama 7S hapụrụ anyị nkọwa anyị maara nke ọma na nke a. Middị dị n'etiti etiti nke na-eme nke ọma, yana otu imewe ekwentị akpọrọ na Jenụwarị. Ọ bụ ezie na na nke a lekwasịrị anya n'ahịa India n'ụzọ doro anya. Ọzọ bara uru maka ego. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,3-inch Incell LTPS nwere mkpebi pikselụ 2340 x 1080 na nhazi 19,5: 9
Ihe nhazi: Snapdragon 660
Esịtidem nchekwa: 32/64 GB (Gbasaa ruo 512 GB na kaadi microSD)
Kaadị esereseNwunye: 512
Igwefoto na-aga n'ihu: 48 +5 MP na ikanam Flash
Igwe n'ihu: 13 MP
Njikọ: Bluetooth 5.0, 4G / LTE, SIM abụọ, WiFi 802.11 Dual, njikọ USB-C
Ndị ọzọ: Emeghe site na ihu ihu, ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ
Batrị: 4000 mAh na 18W ngwa ngwa
Sistemụ arụmọrụ: Achịcha 9.0 Android na MIUI 10 dị ka akwa nhazi
Akụkụ: X x 159.21 75.2 8.1 mm
Ibu ibu: 186 grams
Gịnị mere eji wepụta ụdị ọhụrụ a maka ahịa ndị India? O nwere ike ịbụ ihe ọtụtụ n'ime gị na-eche. Ekwentị na-ebido na India na mbido afọ a, mana Redmi Note 7 abụghị nke anyị nwere ike. zụta na Spain. Kemgbe nke a, ekwentị nke emepere na mba Eshia na mbido afọ a nwere igwefoto dị iche. Kama ihe mmetụta 48 MP anyị nwere na nke a, eji 12 MP otu. Ọ bụ ihe dị iche na ekwentị.
Ugbu a, na ụdị ọhụrụ a, nke ewepụtara n'okpuru aha Redmi Rịba ama 7S, anyị na-ahụ otu nkọwa dị ka ekwentị ahụAnyị enweela ike ịzụta na Spain ruo ọtụtụ ọnwa. N'ihi ya, a gbanwere ihe mmetụta a nanị, iji gosi ekwentị ọhụrụ nke atọrọ iji ree nke ọma na mba ahụ. Ọ bụ omume a na-ahụkarị na ụdị, yabụ n'akụkụ ya abụghị ihe kwesịrị iju anyị anya nke ukwuu.
Dị ka anyị kwurula, a ga-amalite ụdị ekwentị a naanị na India. N'ihi na n'ahịa ndị ọzọ, dị ka Spain, anyị nwere ike ịzụta ya na eze maka ọnwa. Mbido ya na India bụzi nke gọọmentị. Yabụ ndị na-azụ ahịa na mba a na-achọ Redmi Rịba ama 7S, nwere ike zụta ya na mbụ.
Dị ka atụ anya, ekwentị ahụ dị oke ọnụ karịa Note 7 nke malitere na India na mmalite nke afọ. Anyị na-achọta nsụgharị abụọ nke ngwaọrụ ahụ dabere na RAM na nchekwa dị n'ime. Nke mbụ n'ime ha, nke nwere 3/32 GB, ka ebidoro jiri ego nke 10.999 rupees Indian, nke bụ ihe dịka euro 141 na ọnụego mgbanwe. N'aka nke ọzọ, ụdị nke abụọ nke Redmi Rịba ama 7S, yana 3/64 GB, ọnụahịa ya bụ 12.999 rupees, nke bụ ihe dịka euro 167 na ọnụego mgbanwe.
Ihe niile na-egosi nke ahụ ekwentị ga-abụ kụrụ na India. Yabụ, anyị ga-ahụ etu ahịa ga - esi bawanye karịa, gafere nde anọ erere ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Redmi Rịba ama 7S: Aha ọhụrụ maka mmata ochie
Google enwere ike igbochi ụdị ndị China dịka Xiaomi ma ọ bụ OnePlus?